सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तो नुन हामी बिक्री गर्छौँ : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको अन्तर्वार्ता | Ratopati
सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तो नुन हामी बिक्री गर्छौँ : साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरको अन्तर्वार्ता
personटुना भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeअसार ८, २०७५ chat_bubble_outline0
नेपालमा नुनको बिक्री वितरण गर्ने एक मात्र आधिकारिक संस्था हो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन । ४५ वर्षदेखि नेपालमा नुनको बिक्री वितरण गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ सरकार र दातृ निकायको अनुदानबाट सञ्चालित छ । अहिले आएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई तत्कालीन समयमा दातृ निकायले दिएको अनुदानलाई सरकारले सेयरमा परिणत गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सम्झौता विपरीतको कार्य भएको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । कतै साल्ट ट्रेडिङलाई पनि नेसनल ट्रेडिङको अवस्थामा पुर्याउने खेल सुरु भएको त होइन भन्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । यदि यो कदम सरकारले चाल्यो भने अदालत जाने साल्ट ट्रेडिङले चेतावनी दिएको छ । यसै विषमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि टुना भट्टले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरसँग कुराकानी गरेकी छिन् ।
—साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन कुन उद्देश्यका लागि स्थापना भएको थियो ?
२०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना भयो । विशेषतः नुनको बिक्री वितरणका लागि भनेर साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको हो । आयोडिनको कमीले जनतामा देखिएका समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर सरकारले चिन्ता जाहेर गर्यो, परिणाम स्वरूप साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भयो । बजारमा गुणस्तर नभएको नुन बिक्री वितरण हुने र नुनको भाउमा घटबढ हुने गर्दथ्यो । नुनको गुणस्तर बढाउन तत्कालीन श्री ५ को सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसबेला वाणिज्य विभागका निर्देशकले हामी ७ जना नुनका व्यापारीलाई बोलाई नेपालमा नुनको गुणस्तर सुधार गर्न र जनतालाई गुणस्तरीय नुन खुवाउन पर्यो भन्दै छलफल गर्यो । अनि हामीलाई २५र२५ हजार सेयर लगानी गरी साल्ट ट्रेडिङको स्थापना गर्न सुझाव पनि दियो । तत्पश्चात नेसनल ट्रेडिङ र वाणिज्य विभागले पनि एक एक भाग सेयर राखी सरकारको २१ प्रतिशत अनि हामी नुन व्यापारीको ७८ प्रतिशत सेयर लगानी गरेर साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा व्याप्त आयोडिनको कमीले हुने रोगको निवारण गर्नु थियो । लगत्तै हामी व्यापारी र सरकार मिलेर देशका हरेक ठाउँमा आयोडिन युक्त नुनको बिक्री वितरण गर्न सुरु गर्यौँ ।
—साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सेवामुखी संस्थाको रूपमा स्थापना भए पनि हाल यो व्यावसायिक हुनुलाई कसरी लिने ?
सरकारल त्यो बेला नुनको गुणस्तर ठीक नहुँदा हामीद्वारा गुणस्तरीय नुनलाई सही तरिकाले जनता समक्ष पर्याउन हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो । जनतामा कण्ठ रोगको समस्या, बालबच्चाको वृद्धिमा कमी, सुस्त मनस्थिति जस्ता थुप्रै समस्या थिए त्यो बेला । त्यसको निवारण गर्न सरकारले हामीलाई जिम्मा दिएको हो । हामी त्यो काममा सफल पनि भएका छौँ, जसको उदाहरण, सरकारले अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हामीलाई पुरस्कार पनि दिएको थियो । पछि सरकारले नुन बाहेक देशमा सङ्कट परेको बेलामा उपयोगी हुने गरी चिनी, मल र अन्य खाद्यान्नको काम पनि दिने भनेको थियो । त्यहीअनुसार सरकारले चिनीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिएर हामीलाई चिनी बिक्री गर्न दिएको थियो । न्यून नाफा लिएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीको पनि बिक्री सुरु गरेको हो । विशेष गरेर हामीले दशँै तिहार जस्ता चाडमा नुन चिनीलगायतका खाद्यान्नको कमी हुन नदिन र व्यापारीले जथाभावी भाउ बढाउने हुँदा यसको विकल्पको रूपमा साल्ट ट्रेडिङले कार्य गर्यो । यसमा हामीले न्यूनतम नाफा लिएर उपभोक्ताको चित्त बुझाउन सफल भयौँ ।
—साल्ट ट्रेडिङलाई सस्टेन गर्न कसरी सक्नुभयो ?
हामीले काम गरेका छौँ नि । सुरुमा निकै कठिन भयो । २५/२५ हजारको लगानीले थेगेन अनि फेरि २५/२५ थपेर ५० हजारको सेयर पुर्यायौँ । यति गर्दा पनि मागअनुसारको नुन किन्न हामीलाई गाह्रो भयो । सरकारले भारत सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्यो । भारत सरकार नेपाल सरकारको प्रस्तावमा सकारात्मक भयो र तीन महिनाका लागि उधारोमा नुन दिन सहमत भयो । यसरी उधारोमा केही समयका लागि नुन पाएपछि हामीले नुनलाई स्टक राख्न सक्यौँ र विस्तारै माग पूर्ति गर्दै लैजान सक्यौैँ । अनि नुनको भाउमा एकरूपता कायम गर्दै घरघरमा आयोनुन पुर्याउन सक्यौँ । साल्ट ट्रेडिङ र सरकारले नुनको अभाव हुन नदिन कम्तीमा पनि ६ महिनाको स्टक राख्ने क्षमताको विकास गर्यो । नेपाल सरकार, जपान सरकार र भारत सरकारको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट देशका विभिन्न भागमा गोदाम निर्माण भए, जसले गर्दा नुन राख्न सक्यौँ । ४० वर्ष अगाडि बनेका गोदामहरूमा हामीले अझै पनि नुन स्टक राख्ने गरका छौँ । त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोदाम र ढुवानीमा अनुदान दिने भन्ने थियो, त्यही अनुदानका भरमा आजसम्म यसरी टिक्न सफल भएको हो । अनि अर्को सहर र दुर्गम जिल्लामा नुनको भाउ एउटै कायम गर्यौँ । ढुवानीमा अनुदान पाएकाले जनतालाई एउटै मूल्यमा नुन पुर्याउन हामी सफल भयौँ ।
—त्यसो भए अनुदानले नै साल्ट ट्रेडिङलाई सस्टेन गरेको हो ?
अनुदानले मात्र होइन, सरकारी नीतिले गर्दा हामीलाई माथि आउन सहयोग गर्यो । सरकारले जनतालाई सस्तोमा नुन खुवाउनु पर्यो, जनतामा देखिएका समस्या जस्तोः कण्ठ रोग, सुस्त मनस्थिति, बालबालिकाको वृद्धि विकासमा कमीलाई निर्मूल पार्नुपर्यो भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । हामीले त्यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ अनि त सरकारले हामीलाई विश्वास गरेर संस्थालाई अगाडि बढाउन साथ दियो । विनानाफा यो काम हामीले सम्पन्न गर्यौँ । जस्तोः ०४६ सालमा नेपाल र भारतबीचमा फाटो आयो । भारतबाट नुन आयात बन्द नै भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ६ महिनाको नुन स्टक राखेर भाउ नबढाई जनता समक्ष पुर्याउन सफल भएका थियौँ । त्यस्तै पछिल्लो पटक भएको नाकाबन्दीमा पनि भारतबाट नुन आउन बन्द भएको थियो । त्यो बखत पनि हामीले जनतालाई कुनै अड्चन आउन दिएनौँ । हामीले ६ महिनाको नुन स्टक राखेर एक पैसा पनि नाफा नलिई काम गर्यौँ । यस कार्यमा सरकारले हामीलाई धन्यवाद पनि दिएको थियो ।
—दातृ निकायले दिएको अनुदानलाई अहिले सरकारले सेयरमा परिणत गर्नुपर्छ भनेको छ । यसमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भनाइ के छ ?
यो कुरा २०६७ सालतिर पनि उठेको थियो । एक जना मन्त्रीले कुरा उठाएका थिए । हामीले सबै कागजपत्र बुझेर सरकारले र दातृ निकायले दिएको अनुदान साल्ट ट्रेडिङलाई होइन कि जनतालाई हो भन्ने बुझेपछि त्यो विषयले निकास पाएको थियो । त्यसबखत जापानी अनुदानमा निर्मित भौतिक सम्पत्तिको हकमा त्यो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी अध्यावधिक बनाइराख्न लगाउने मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो । त्यो पत्र हामीसँग जस्ताकोतस्तै छ । अब अहिले जे प्रचार गरिएको छ, त्यसमा यो पत्र नै गायव छ । यो के भएको हो, हामीले बुझ्न सकेको छैन । यस्तो अनुदान सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा त कानुनत पनि मिल्दैन । हाम्रो प्रबन्ध पत्र नियमावली छ । नियमावलीअनुसार हामी एक इन्च पनि यता उता जान सक्दैनौँ, कानुनी अड्चन छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको पक्कै होइन होला । खै किन यस्तो कुरा आयो बुझ्न सकिएको छैन ।
—सरकारका दुई मन्त्रालय (अर्थ र गृह मन्त्रालय) बीचमै कुरा बाझिएको देखिन्छ । अर्थले अनुदान सेयरमा परिणत गर्नेभन्दा गृहले यसलाई नमिल्दो भनेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
२०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले नै पत्र दिएको छ । यो नमिल्ने भनेर पत्र दिँदा दिँदै पनि अहिले यो पत्र हरायो भनेर नयाँ व्यक्तिले नयाँ डकुमेन्ट खडा गरेर सेयरमा परिणत गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुनेको मात्र हो । हामीलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको पनि छैन । के गर्न लागेको थाहा पनि छैन ।
—त्यसो भए अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईंहरूलाई कुनै आधिकारिक पत्र आएको छैन ?
छैन छैन । आजसम्म हामीलाई केही थाहा छैन । खाली बाहिरी कुरा मात्र आएको छ । यसरी पत्रपत्रिकामा आएजस्तै गरेर यदि भोलि हामीले गर्र्नैपर्ने भयो भने पनि कानुनतः यो मिल्दैन । अनुदान पनि हामी (साल्ट ट्रेडिङ)ले पाएको होइन, यो जनताले पाएको हो । जनतालाई दिएको अनुदानमा के गर्न खोजेको हो ? ढुवानी अनुदानबाट यतिका वर्षदेखि जनताले सस्तोमा नुन खाए । अनुदानबाटै बनेका गोदामहरू पनि जीर्ण भइसकेका छन् । ३०औं वर्ष पुराना आधाभन्दा धेरै गोदामको अवस्था जीर्ण छ । कुनै भूकम्पले त कुनै पुरानो भएर बिग्रिएका छन् । यसमा भने कसैको चासो छैन । नुनले सिमेन्ट बालुवा इँटालाई गलाउने हुँदा गोदामहरू भत्किन थालेका छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामीले नुनमा कमी आउन दिएनौँ । यस्ता कुरालाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तोमा नुन बिक्री गर्ने देश हाम्रो हो । यो कसरी सम्भव छ त ? हामीसँग न त नुन खानी छ, न त पर्याप्त साधन स्रोत । जहाँ जहाँबाट नुन आयात गरिन्छ त्यहाँभन्दा हामीले सस्तोमा नुन दिएका छौँ ।
—सार्क राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा सस्तोमा नुन बिक्री गरेको भन्नुभयो । यो कसरी सम्भव भयो ?
त्यही हो अनुदान । हाम्रो देशमा सवैभन्दा महंगो भनेको ढुवानी हो । दुर्गम जिल्लाहरूमा नुन पुर्याउन सजिलो छैन । कति ठाउँमा हेलिकोप्टरबाट त कति ठाउँमा अहिले पनि भरियालाई बोकाएर नुन लैजानुपर्ने अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा पनि नुनको मूल्य यथावत र सस्तो हुनु भनेको सामान्य होइन । नेपाल सरकारले हामीलाई ढुवानी अनुदान दिन्छ । भारत सरकारले पनि हामीलाई अनुदान दियो । साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराएको जग्गामा जापान सरकारले सन् २००२ मा वस्तुगत अनुदानअन्तर्गत विराटनगर धनगढी, सिमरा, लालगढ, भैरहवा, नेपालगञ्ज र बर्दिबास गरी ६ स्थानमा कूल २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम निर्माण गरी साल्टलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । अतः हामीले नुन न्यूनतम नाफा लिएर सस्तोमा बेच्त सक्यौँ । राष्ट्र बैङ्कको मुद्रास्फीतिमा हेर्ने हो भने हालसम्मको स्थिर मूल्य भनेको नुनको नै छ । यस्तै कुरालाई मनन गरेर नै होेला सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हामीलाई पुरस्कृत पनि गरेका थियो ।
—यदि अर्थ मन्त्रालयले भनेजस्तै अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने हो भने यसको असर त सीधै दुर्गममा देखिने भयो नि हैन ?
अब त्यस्तो हो भने त अवश्य पनि दुर्गममा यसको असर परि नै हाल्छ नि । केही ठाउँमा अझै पनि कण्ठरोगका रोगीहरू छन् । यो रोग पूर्ण रूपमा निवारण हुन अझै सकेको छैन । अब आयो नुन सबै जनता समक्ष पुर्याउन सकिएन भने पुरानो अवस्था पुनः फर्किन सक्छ । विकटका जनताले महँगोमा नुन खरिद गरेर खान सक्दैनन् अनि आयोडिनको कमीले हुने रोग पुनः बल्झिन सक्छ । विकट पहाडी जिल्लामा अझै पनि कतिले आयो नुनु नखाई ढिके नुन खाने गरेको पनि पाइन्छ । यदि अनुदान नै बन्द गर्न सरकार लाग्यो भने अवस्था कस्तो होला ? यो सरकार र अर्थ मन्त्रालय आफैले बुझ्न जरुरी छ ।
—केही व्यापारीहरूको उक्साहटमा अर्थ मन्त्रालयको यो भनाइ आएको भनिएको छ नि ?
एउटाले गरेको काममा अर्कोले डाहा गर्ने प्रवृत्ति हुन सक्छ । सबैले नुनको काम पाउनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि जनताले सर्वसुलभ रूपमा सस्तोमा नुन पाउनुपर्छ भन्ने हो । जनतालाई मारमा पारेर व्यापारीलाई आड दिनु जायज हुँदैन । यदि यस्तो भयो भने सीधै मारमा पर्ने जनता हुन् । हामीसँग जम्माजम्मी १२ करोड सेयस पुँजी छ । विस्तारै विस्तारै जग्गा जमिन किनेर हामीले गोदाम बनाउन सक्यौँ । हामीले ५० वर्ष अगाडि कालीमाटीमा २ लाखमा १३ रोपनी जग्गा किनेको थियौं । अहिले हाम्रो नाफा भनेको त्यही जग्गा हो । त्योबाहेक अरू केही छैन । हामीले जबजब सङ्कट पर्छ, त्यो बखत जनतालाई नुन अभाव हुन दिएनौँ र मूल्य पनि बढाएनौँ । त्यही भएर अन्य खाद्यान्न, चिनी, मल, ग्यास बिक्री गर भनेर सरकारले साथ दियो । त्यो काम व्यापारीले गर्न सक्दैनन् । व्यापारीले जनभावनालाई सम्झँदैन सङ्कटको बेला व्यापारीले जनतासँग फाइदा लट्छन् के अब तिनै व्यापारीको विश्वास सरकारले गर्ने त ? हामीले त जनताको सेवा गरेको कारणले नै यहाँसम्म आउन सफल भयौँ । अब नाकाबन्दीको समयकै कुरा गरौँ न ग्यासमा अनि खाद्यान्नमा भाउ बढाएर व्यापारीले कमाउने अवसरका रूपमा नाकाबन्दीलाई प्रयोग गरे तर हामीले हाम्रो स्टक रहुन्जेल भाउमा तलमाथि हुन दिएनौँ ।
—नेपालका केही विकट ठाउँमा खाद्य सङ्कट बेला बेला देखिन्छ । यसलाई साल्ट ट्रेडिङले कसरी सहयोग गर्छ ? नुन मात्र सस्तोमा दिने हो कि खाद्यान्न पनि सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्छ ?
खाद्यान्नलाई हामीले आफै सस्तो गर्न सक्दैनौँ । सरकारले अनुदान नदिएसम्म पूर्ण सस्तो गर्न सकिँदैन । हामीलाई सरकारले दिएको नुनको काम हो, यसमा अनुदान पनि पाएका छौँ । त्यसैले सस्तो मूल्यमा हरेक ठाउँमा एउटै मूल्य कायम गर्न सकेका हौँ । सरकारले हामीलाई नुनको बिक्री वितरण प्रभावकारी भएर नै खाद्यको अनुमति दिएको हो । त्यसैले हामीले सकेसम्म बजार भाउभन्दा कममा बिक्री गरेका छौँ । हामीले कमाइ गर्नभन्दा पनि सस्तोमा लिएर उपभोक्तासँग न्यूनतम नाफा लिएर खाद्यान्नको काम पनि गरेका हौँ । हाम्रो पुँजीभन्दा बाहिरको काम चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ । यदि सरकारले नुनमा जस्तै खाद्यान्नमा पनि ढुवानी अनुदान दिएमा भने अवस्य यो काम गर्न सक्छौं । जस्तोः दशैँ तिहार जस्ता चाडवाडमा खाद्य अभाव हुन नदिन र बजार भाउ जथाभावी हुने हुँदा हामीले सस्तोमा सामान खरिद गरी सस्तैमा बेच्ने गरेका छौं ।
—स्वदेशमै उत्पादन हुने चिनीको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको भूमिका कस्तो छ ?
चिनीको मागलाई स्वदेशी चिनीले धान्दैन । यहाँ उत्पादन हुने चिनीभन्दा माग बढी हुने हुँदा भाउ पनि बढी नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट चिनी आयात गर्नुको विकल्प हुन्न । जस्तो चाडवाडको बेला दस हजार टन चिनीको माग भयो भने सरकारले हामीलाई पाँच हजार टन चिनी बाहिरबाट ल्याउन भन्छ । स्वदेशी चिनीले पुग्दैन । यस्तोमा हामीले बाहिरबाट नै चिनी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ । एक साल के यस्तो भयो कि नेपालमा उखु किसान र चिनी उत्पान गर्ने उद्योगीहरूले नाफा नपाएको गुनासो आयो । यस्तोमा सरकारले हामीलाई चिनी किनेर वितरण गर्न भन्यो । यदि नोक्सान भयो भने सरकारले बेहोर्ने सहमती भयो । हामीले चिनी किनेर बिक्री पनि गर्याँै । त्यसबखत २ करोडको नोक्सान भयो तर त्यो नोक्सान सरकारले अहिलेसम्म पनि भरेको छैन । यस्ता समस्या खडा हुने हुँदा हामी बाहिरबाटै चिनी भित्र्याउन बाध्य हुन्छौँ ।
—उखु उत्पादन गर्ने किसान र चिनी व्यापारीबीचमा राम्रो समन्वय नहुँदा सधैँ किसान मारमा पर्ने गरेका गुनासा आइरहेका हुन्छन् । हाल सरकारले किसानको गुनासोलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त मूल्य नदिने व्यापारीलाई कारवाहीसम्मको कार्ययोजना बनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङको अध्यक्षको हैसियतले के भन्नुहुन्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिएको हो ?
उखु उत्पादन अलि कम पनि छ । उखुको मूल्य नपाएको मिलवालालाई सस्तोमा बेच्नुपरेको उखु किसानको गुनासो हुन्छ । मिलवाला भने सरकारले हामीलाई चिनी बेच्नमा कन्ट्रोल गर्यो, राम्रो भाउ दिन सकेन, जसले गर्दा किसान हामीसँग असन्तुष्ट छन् भन्छन् । यस्तोमा समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । उखु किसान र मिलवालालाई मिलाउने काम सरकारको हो ।
—हाम्रो देशमा बेलाबेला हुने प्राकृतिक र अन्य विपत्ति र यसले निम्त्याउने खाद्य सङ्कटलाई साल्ट ट्रेडिङले कसरी व्यवस्था गर्दछ ?
हामीले खाद्यन्नलाई त्यति ध्यान दिएको छैनौँ । मुख्य नुनको जिम्मेवारी हो र त्यस्तो विपद्को अवस्थामा हामीले नुनको कमी हुन दिएनौँ र दिँदैनाँै । हामीले ६ महिनाको मौज्दात राख्छौँ र यसले त्यस्तो अवस्थामा परिपूर्ति गर्छ । नाकाबन्दी, भूकम्प, बाडी पहिरो जस्ता विपद्को बेला हामीले नुनको अभाव हुन दिएनौँ । हामीलाई लाग्छ हामीले जनतालाई खुशी पारेका छौँ ।
—साल्ट ट्रेडिङको पुँजी कति छ ?
हामीसँग १२ करोडको पुँजी छ । सेयर अनुपातमा हामीसँग एकदमै कम पुँजी छ । साल्ट ट्रेडिङले २०२७ सालमा खाद्य उद्योग सुरु गर्यो । त्यस्तै वनस्पती घिउको उत्पादन सुरु गर्यो । मोरङ सुगर मिल, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, न्यासनल फाइनान्स (पछि सनराइज बैङ्कमा मर्ज भयो) । हाम्रो नाफा भनेका यी संस्थाहरू हुन् । हामीले पाउरोटी बनाउन मैदा फ्याक्ट्री खडा गर्यौं । यसमा नाफा नभए पनि हामीले मैदा मिल सञ्चालन गरि नै राखेका छौँ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले हालसम्म यी संस्थाको स्थापना गरी अगाडि बढेको छ । अहिले सरकारले अनुदानलाई पुँजीमा परिणत गर्न खोजेको देखियो । यो त साह्रै अन्याय हुन्छ । यस्तो यदि हो भने राणाकालीन प्रवृत्ति झल्कने कार्य हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी गणतन्त्रमा छन् या एकतन्त्रीय शासनमा छन्, बुझ्न सकेको छैन ।
—यदि अनुदान सेयरमा परिणत भयो भने के हुन्छ ? अहिले आएर यो विषय उठ्नुको पछाडिको कारण के होला ? कतै साल्ट ट्रेडिङ पारदर्शी नभएको पो हो कि ?
हामीले काम मात्र गरेका हौँ । अनुदानको रकम खर्च भइसकेको छ । जनतालाई दिएको अनुदान ढुवानी र गोदाम निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । कहाँ खोज्ने अब त्यो रकम ? यो हँुदै नहुने कुरा हो । यदि हामी पारदर्शी थिएनौँ भने यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्थ्यौँ ? यसलाई यसरी सस्टेन गरेर राख्नको पछाडिका कारण हाम्रो पारदर्शिता नै हो । यदि यो कदम सरकाले चाल्यो भने हामी अदालत जान्छाँै । विभिन्न देशले हाम्रो देशका विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गरेको छ । के त्यो सबै सेयरमा परिणत गर्ने त ? यस्तो अनुदान सहायता कति छ कति, ती सबैलाई के गर्ने ? यो सबै सेयरमा परिणत गर्ने हो भने नेपालको हालत के होला ? राणा शासनमा तिमीसँग धेरै जायजेथा भयो, अब लेउ भन्ने चलन थियो, त्यस्तै हुन्छ । अनुदान पाएको छ जनताले मार भने साल्ट ट्रेडिङलाई भयो भने के भन्ने यसको जवाफ जनताले नै दिन्छन् ।
– साल्ट ट्रेडिङको विकासका लागि भावी योजना के छ ?
हामी सरकार र जनताको बीचको ब्रिज हौँ, यसमा हामीले जनतालाई र सरकारलाई खुसी बनाउने काम गर्यौँ । भविष्यमा पनि जनता र सरकारको ब्रिज बनेर खुसी बनाउने कोसिस रहनेछ । अझ नाफामा लैजान हामीले सक्दो पहल गर्नेछौं । साल्ट ट्रेडिङ यस्तो पब्लिक लिमिटेड हो, जो जस्ताको त्यस्तै पारदर्शी छ । हामीले कमाएको नाफा भनेको पारदर्शिता हो यो कायम राख्नेछौँ ।
‘मर्जरभन्दा पुँजी सङ्कलन ठूलो विषय हो’
'शेयर बजारमा मनोचिकित्सक पाइँदैन, लगानीकर्ताले आफै मनोबल उच्च राख्नुपर्छ'
‘न्यु सुपर चामत्कारिक खाताका बारेमा जानकारी हुने ग्राहक अन्त खाता खोल्न जाँदैनन्’
‘मर्जरको अनुभवले खारिएका छौँ, २ मा २ जोड्दा २२ हुनेगरी सिनर्जी इफेक्ट ल्याउँछौँ’
‘अटोमोबाइल क्षेत्रमा सिप्रदीले अटो इलेक्ट्रिसियन तालिम सञ्चालन गर्दैछ’
'ढिला भइसक्यो, अब बजारलाई नै ब्याजदर निर्धारण गर्न दिऔँ '
पहिरोले पुरिएर एकै घरका ३ जनाको मृत्यु, ४ बेपत्ता
भीआईपी र भीभीआईपीको आलोचना गर्ने मात्रै कारवाहीको दायरामा, सर्वसाधारणको उजुरी छानबिनमै पुग्दैन
प्रेममा धोका पाएपछि मागी विवाह गरेका बलिउड सेलिब्रेटी